Brand Kuona chinhu chakakosha pakubudirira Kushambadzira | Martech Zone
Brand Perception ndiyo kiyi yekubudirira Kushambadzira
Chishanu, January 1, 2021 Mugovera, January 2, 2021 Douglas Karr
Pandakatanga kushanyira Chicago nevabereki vangu makore apfuura, takaita zvekumanikidzwa kushanyira Sears Tower (yava kunzi se Willis Tower). Kufamba mabhuroko kuenda kuchivako uye kutarisa kumusoro - unotanga kufunga nezve chishamiso cheinjiniya icho chiri. Iwo mamirioni 4.56 mamirioni akakomberedza tsoka, akaenzana enhau 110, zvakatora makore matatu kuvaka uye kushandisa kongiri yakakwana kuita mugwagwa wemasere, mashanu mamaira-marefu.
Wobva wapinda mulifiti wobva wakwira 103 pasi pa Skydeck. Panguva iyoyo, 1453 tsoka kumusoro kwevhu, iwe unokanganwa nezve chivakwa. Kutarisa kunze kuChicago, Gungwa reMichigan, uye iko kumusoro kunokutora. Iko maonero anochinja zvachose kubva pasi pechivako kusvika kumusoro kwaro.
Pane dambudziko nekuona… zvinoda kutitsausa. Kana iwe waigara wakamira pazasi peiyo Willis Tower, haungambofarire guta risinganzwisisike rawakamira mariri. Isu tinowanzo kuita izvi sevashambadziri. Isu tinowanzoisa kambani yedu kana zvigadzirwa zvayo kana masevhisi sepakati pehupenyu hwevatengi vedu. Isu tinofunga isu tiri chivakwa chikurusa pasirese. Tingave vakuru, asi kuguta - iwe unongova chimwe chezviuru zvezvivakwa.
Dzimwe nguva vatengi vedu vanotibvunza nezve kuvandudza zvakavanzika, zvevatengi-zvakavakirwa pasocial network. Vanoshamisika patinovaudza kuti ivo havana kukosha zvakadaro. Ivo vese zviuru zvevatengi zvavanazvo, vamire muindastiri, nyanzvi dzavanadzo pane vashandi, huwandu hwenhare dzavanowana, huwandu hwekurova kune yavo webhusaiti, yada, yada, yada. Ivo vanotanga network ... hapana ane hanya. Hapana anouya. Iye zvino inguva yekurohwa uye vanonyara… saka vanoita zvinhu sekumanikidza vatengi kushandisa network kuti vatsigire, vozvipinza mukati otomatiki, uye kumanikidza mamaneja anoona kuti awedzere kukura kwakaita network. Gomera.
Dai vakanzwisisa maonero evatengi, vangadai vasina kumbobvira vadzika nemugwagwa iwoyo. Ivo vanozoziva kuti ivo chikamu chidiki chevatengi 'zuva rose rekushanda. Zvichida vanokwana mukati memaminetsi gumi neshanu kamwe pasvondo izvo mutengi zvaakaisa parutivi kushandisa chigadzirwa chavo. Kana ivo vakanzwisisa maonero evatengi vavo, pamwe vangadai vakasundira kuti varambe vachikurumidza uye vachiteerera kune zvavanoda vatengi pane kudyara mune chimwe chinhu icho vatengi vavo vasingade kana chavanoda. Panzvimbo pekuvandudza pasocial network, pamwe vangadai vakagadzira mupepeti akavandudzwa, chikamu cheFAQ, kana kuburitsa mamwe mavhidhiyo ekuti vangashandise sei zvishandiso zvavo.
Kufunga hakusi kwekuteerera vatengi vako, ndezvekunzwisisa bhizinesi rako nemaonero avo:
Nzwisisa kuti sei, riini, uye nei vachikushandisa.
Nzwisisa zvavanoda pamusoro pako uye zvinovashungurudza.
Nzwisisa chii chingaite kuti hupenyu hwavo huve nyore kushanda newe.
Nzwisisa maitiro aunogona kuvapa iwo kukosha kwakawanda.
Paunofunga izvo, shandisa iyo nzira mukushambadzira kwako. Pamwe ungave zvirinani kusanyora iwo 438 maficha awakawedzera mukuburitswa kwazvino - uye panzvimbo pezvo bvuma kuti iwe unoziva vatengi vako vakabatikana nebasa rinokosha… asi kwemaminetsi gumi nemashanu vanokuda, unogara uripo .
Tags: Chicagomhinduro yemutengimaonero evatengiachiteereramaonerosears towerwillis tower
Repurpose Imba: Dhiraivha Yakawanda Traffic uye Inotungamira Neiyi Inogovaniswa Yemagariro Midhiya Sevhisi
Ndeapi Mhando dzeWebhu (Rima, Rakadzika, Pamusoro, & Rakajeka)?
Mar 14, 2013 pa 4: 58 AM
Ndinobvumirana newe chose Douglas! Kunze kwekunge iwe uchiziva mutengi wako uye kuti ndeipi basa rako muhupenyu hwavo, haugone kugadzira inobudirira kushambadzira mushandirapamwe. Maonero avo ekambani yako akakosha kuti ubudirire mumusika wakaoma.
Mar 14, 2013 pa 7: 34 AM
yakanaka post (semazuva ese), Doug!